Baarlamanka Iswiidhen oo ka doodey howlaha God man-ka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhallaan ajnabiya oo joogga goobta iskuulka xannaannada ee xaafadda Tensta
Baarlamanka Iswiidhen oo ka doodey howlaha God man-ka
La daabacay torsdag 12 april 2007 kl 18.12
Kontoroolka dawladda ee heyaddaha dawliga ah sida kuwa gobollada iyo degmooyinka ayaa la sheegey iney leeyihiin iimo fara badan ee halis ah.
Middaasi waxaa qaba, guddiga baarista qaranka ee afka iswiidhishkana lagu yiraahdo Riksrevisionen. Guddigaasina oo farta ku fiiqey 16 warbixiin ee arrimmahaa ku saabsan lana qorey saddexdii sannadood ee ugu dambeeysey.
-Waxey iimo ka jiraan dhammaan kontoroolka guud ee la socosho.
Waa mid muhiim u ah dawladda sidey ula socon lahaayeen in shuruucda la waafajiyo ama la dhaqan geliyo. Waxaa na soo gaara ama aan aragnaa warbixinno meel u wada jiheysan ee kuwaa la xiriira, sida ey sheegtey gabadha la yiraahdo Eva Lindström, ahna sarkaalad ka howlgasha guddiga baarista qaranka.
- Sarkaaladdaa ayaa u aragtey in dhibaataddaasi tahey mid aan si buuxda loo tixgelin, iyada oo islamarkaana ey saameyneyso dhammaan ammaanka iyo nabadgelyada bulshada dalka ku dhaqan dhammaanteed.
16-ka warbixin ee ey ka hadleyso sarkaalad Eva Lindström ayaa la xiriira baaritaanno laga sameeyey ama saameeya sida ey heyad goboleedyadu u kontroolaan sidey u hiorgeliyaan degmooyinku sharciga la xiriira adeegga dadyoowga curyaamiinta iyo ka warqabka ey heyaddahaasi ka warqabaan sida ey hoowlahooda u gutaan masuuliyadda saaran waxa loo yaqaan God man.
Berrito oo Khamiis ah ayuu baarlamanka dalku ka fariisan doonaa dood la xiriirta arrimmahaasi, halkaasina oo go’aamada la filayo iney ka soo baxaan ey ka mid yihiin in heyad goboleedyadu sannadkiiba ugu yaraan mar kormeer ku sameeyaan heyadaha ey masuulka ka yihiin iyo go’aanno kaleetaba.
Hoowsha God man-kana waxaad dhageystayaal ku maqli doontaan barnaamijkayaga maanta qeybihiisa dambe.
Iminkana haddii aan u guuro magaalada Borlänge waxaa foodda idinku soo haya wareysi aan la yeelaney Cabdullahi Axmed Sabriye oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Borlämnge oo beryahan dambe ey soomaalidu si xoogan u degeyaan.
Badankood dhallaanka waxaa masuul ka ah waalidkii dhaley. Iyaga ayaana faraha ku haya masuuliyadda, waa tiro aad u yar dhallaanka ey masuul ka yihiin dadyoow aan aheyn waalidiintii dhashey. Iyaga ayeyna saaran tahey masuuliyadda dhaqaale tan mujtamac iyo sharciba, sidii djhallaankaasi nabadgelyo ugu noolaan lahaayeen.
-Sidaasi waxaa tiri Sarkaaladda la yiraahdo Kerstin Fäldin, kana howl gasha heyadda loo yaqaan överförmyndare nämnden ee degmada Istockholm, middaasina oo qaabilsan diiwaan gelin, sharciyeynta iyo howlgelinta dadyoowga dooneya iney masuul.
Waana waxyaabaha aannu ku soo qaadan doono barnaamijka maanta qeybtiisan.
Waxa loo yaqaan god man, waxey macnaheedu tahey shakhsi la aaminey, ee shuruucda dalka u degsan sida ey qaarkood qabaan la qabto kolka ey baahiyi timaado.
Sida ku cad sharciga waalidka ”föräldrarbalkan”, ruuxaasi waa mid sharciyeysan, una taagan booskii waalidka
Dhacdooyinkaasi oo ey ugu wacan yihiin arrimmo dhowr ah:
dhallaanka oo aan qaangaarin, cudur aawadii ee waalidkii howshaa fulin lahaa, geeri ku timidey ama sabab kaleba.
Sidoo kale waxaa la qabtaa waxa loo yaqaan Godman kolka uu shakhsigu caafimaad darro maskixiyan ah u baahdo ruux danihiisa ilaaliya.
Masuuliyaddan ayaa hoos timaadda degmo walba cidda qaabilsan, middaasina oo ey tahey iney dusha ka socoto heyad goboleedka Länsstyrelsen.
- Bishii Juulaay ee sanndkii 2005-tii waxaa dalka ka hirgaley go’aan sharciyeed la xiriira God man-ka waxa loo yaqaan, midaasina oo shakhsiga god man-ka ah lagu kordhiyey masuuliyadda saaran.
- Cali Daahir waa aabbe soomaaliyeed muddo afar sannadood ah wakhtigiisa geliyey God man-nimada. Maxaa ku kallifey. Goorma ayuu bilaabey, ayaa ka mid ahaa su’aalihii uu jawaabaha naga siiyey.
- Cali Daahir ayaa waxyaabihii aan weydiiney waxaa ka mid ahaa masuuliyadda saaran ruuxa God man-ka ah. Balse inteynaan dhageysan jawaabtaa aan marka hore idin maqashiiyo Kerstin Fälldin oo inoo sheegta shuruudaha laga dooneyo shakhsiga.
- Shuruudaha laga dooneyo waxey yihiin inuu yahey lab ama dheddig leh shakhsiyad wanaagsan, leh waayoaragnimo, islamarkaana ku wanaagsan howsha, sida sharciga ku cad.
Sidoo kale waxey sharci dejiyeyaashii ka fekereen in lagu caddeeyo heyadaha mucayoimaya dadkaasi uga fekero lahaayeen shakhsiga ey howshaa ku aamineyaan.
Cid walba oo caddeymaha noocaasiya wadata ku ma filla iney God man noqdaan, intaa waxaa dheer wareysiga aan a yeelano shakhsiga soo dalbada god-man-nimada. Kerstin Fälldin sida ey sheegtey.